Ukuya ephathini yelusuku lwekutalwa, ucabanga ngalokho umfana iminyaka 10? Phela, ngesikhathi sokugcina izingane zishintshile kakhulu. Ngalesi ubudala, umuntu ebheka yena ngempela omdala, kodwa umphefumulo namanje ingane akholwe inganekwane. Khumbula ukuthi izingane zibaluleke kakhulu ukuba bawanake, kunokuba isipho uqobo. Isimanga kungaba ngempela nesizotha, kodwa kufanele kube kakhulu abakhona. Ngokwesibonelo, ungakwazi uvuke ingane ekuseni, ingoma iholide kuye, nokwethula ikhekhe nge amakhandlela, ehlotshiswe ngegama elithi wengane lokuzalwa. isipho esinjalo kumfana ngasilibala. Namanje sicabanga ukuthi ukunikeza umfana oneminyaka 10 ubudala? Lesi sihloko kuzokusiza kukhethwa.
Noma yimuphi umntwana uyojabula, uma umenywa ukuba idili opopayi bakhe izinhlamvu, okuyinto hhayi kuphela yamnqoba, kodwa futhi uhlele umqondo ezithakazelisayo. Lo mbukiso zizokhanga zonke izimenywa: nojahidada, futhi izingane ezindala, futhi abazali. Kodwa ukukhethwa iqembu show yezingane kungcono hhayi wonge imali ngokukhetha okungcono isabelomali inketho. abadlali ezinhle kuphela uzokwazi jabulisa izingane, ukudlala indima yabo kahle. Vumela engcono kuyoba ezincane, kodwa ocebile, elikhanyayo futhi professional. Zonke izingane zithande umbukiso we insipho Bubbles, olubheka engavamile kakhulu. isofthiwe ezifana ukuzithoba kuhlanganisa umdlalo omnandi, lapho emhlabeni ingane kudala bubble omkhulu.
IBhodi nekhompyutha imidlalo
Isipho esihle uyoba imidlalo ebhodini. Batfutfukisa umcabango, ukuqeqesha ingane futhi nje ube ukuzijabulisa okuhle. Qiniseka ukuthi uthintane esitolo, kungakhathaliseki umdlalo ethile izinyane uvunyelwe, futhi ingabe wayengazithethelela ukweluleka ukuthi umfana iminyaka 10. Ngokukhetha imidlalo ye-computer kufanele yasithatha ngokungathí sina, ngoba manje emakethe ligcwele yekhwalithi ephansi akwazi ukugcina ugcwele ubudlova ngokweqile.
Namanje isiqiniseko sokuthi lokhu zokunika oneminyaka engu-10? I choice omuhle iyona ezemidlalo yokusungula. Ibhola noma i-basketball, ezemidlalo endaweni egumbini, ukuma, izicathulo kanye nokunye okuningi. Manje Scooters ethandwa kakhulu ukuthi kungaba ezivamile, futhi ilungiswe: foldable ngisho kagesi. izimoto ezinjalo ukuhlangabezana nazo zonke izidingo zokuphepha futhi ekhethekile amandla inkinobho injini, esisogwini amasondo ayo. Lezi izipho kuzosiza silondoloze ukuma umfana kusukela zisencane futhi kuyoba isenzakalo waphinda agqashule ekusebenzelaneni computer futhi udlale nabangani egcekeni.
I choice omuhle lokho zokunika umfana iminyaka 10, kuyoba izingubo zokulingisa umdlalo: ompetha, Musketeers, pirates. Yabo ungakwazi ukuthenga esitolo noma ukuzenzela okwakho. Umbono ezinhle zaziyoshunyayelwa ukuthenga inyoni yephepha, epikinikini amasethi, umklami, setha abasha wezakhiwo, unjiniyela, noma Mage. Uma umfana othanda umculo, sinake onobuhle samanje umculo abadlali noma amafoni. I racer abasha bayokwazisa imodeli imoto brand ekuthanda noma isondo ukuze console. Sithemba ukuthi lesi sihloko kuye kwasiza ukuba uphendule umbuzo othi yini ukunikeza guy yakho kuya-DR, ngoba engu-iminyaka eyishumi lokuzalwa ubudala umcimbi kubaluleke kakhulu ukuthi izingane ezimele nge isineke.
Zonke-Russian Usuku Informatics
Christmas imidlalo for kids - zisize iholide!
Usuku umphathi BakaJehova eRussia
Badawia kuyona 3 *, Egypt, incazelo Sharm El Sheikh Ihhotela, ukubuyekezwa
Komzimba - Ukushukuma komzimba ukubaluleka yobuciko
Kanjani ukuze uthole yisakhamuzi Romanian. yisakhamuzi Romanian: imibhalo, izindleko
Yini ukupheka izingane lokuzalwa: amathiphu abazali
Bangaki ikhokhwe womama ushiye? Kwabe sekuqala inkathi okwakungenziwa sokubeletha. Ingabe womama ushiye ubudala?